July 2013 | အိုင်တီဖိုးသားလေး(နည်းပညာ)
Google မှာ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို ရှာလို့ရအောင်လုပ်နည်း
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Window အတွက်
စာစီစာရိုက် လုပ်ငန်းလုပ်သော သူငယ်ချင်းများအတွက်သော မြန်မာစာလုံးဖောင့်
လှလှလေးတွေက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဖိတ်စာဆိုရင်လည်း ဖိတ်စာလှလှလေးရတာပေါ့
လုပ်တာချင်းတူပေမယ့် စာလုံးဖောင်းလှပသေသပ်မှုက အမှတ်ပေးသွားမှာပါ။
ကော်နက်ရှင်တွေကျတဲ့အချိန် ဖေ့ဘွတ်ဝင်ရင်ဘာမှဖတ်လို့အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီတော့ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့စာတွေပုံတွေ ကြည့်ရ တာအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုသုံးမလဲ။ မိုဘိုင်းဖုန်းမှာပေါ်တဲ့အမြင်နဲ့သုံးရပါလိမ့်မယ်။ http://m.facebook.com/
ကိုသွားပီးသုံးလို့ရပါတယ်။ဖုန်းမှာသုံးတိုင်းပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေမှာပါ။ဒါပေမယ့်စာတွေပုံတွေဖတ်လို့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေမှာပါ။ပို့စ်အသစ်တွေတင်တာမြင်ချင်ရင်တော့ Refresh လုပ်လုပ်ပေးပေါ့။
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Window နည်းပညာ
အောက်ကနေ ကြည့်ပြီး တစ်ဖြည့်လုပ်လိုက်ပါနော်.............
၁။ Windows logo + R ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ "appwiz.cpl
၂။ အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့ " View installed upd ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
၃။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရောက်လာလိမ့်မယ် InternetExplorer ကိုရှာပြီး Uninstall
လုပ်လိုက်ပါ ပြီးသွားရင် Reset လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် Reset လုပ်လိုက်ပါ
စာတွေလိုမရေးချင်ရင် သူငယ်ချင်းဆီကစာအုပ်ငှားပြီး Scanလုပ်လိုက်ရုံပဲ။
မိမိလိုချင်တဲ့စာတွေကို Scan လုပ်ယူပြီး အမျိုးအစားလိုက်ခွဲပြီး Save ထားလို့လဲရပါတယ်။
Scan လုပ်ထားတာတွေကိုလည်းလိုသလိုပြန်ပြီးပြုပြင်လို့လည်းရပါတယ်။ ဘာသာစကား
သူငယ်ချင်းတို့အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတာ Movie လေးနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ဖိုင်လေးကိုဖြေလိုက်ရင်အထဲမှာ Apk ရှိပါတယ်။
Your paperless life starts here
The best and most intelligent optical character recognition OCR App
on Android Play – as recognised by our users – just read the reviews
Scanthing extracts text from pictures and documents and allows you to
search for them by keywords on your phone using OCR Optical Character
Recognition technology and now playback the text using Text-To-Speech
I use the app to scan newspaper and magazine articles, the conversion
my students – Rachel Heath, Teacher
Just used it to translate fromamenu in Dutch to English in under 20
seconds whilst sitting in the restaurant, amazing – Lucky Brekova,
Asaperson with very poor sight Scanthing gives meathird eye
meaning I can get on with my life wherever I am – Steve Wright,
movie နဲ့ရှင်းပြထားပါတယ် ဒီမှာနှိပ်ပါ။
Download Filecould | Zippyshare | Dropbox
ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ 40 Top Paid Android Apps & Themes Pack (368 MB) ကို အလကားယူပါ
ဒီနေ့တော့ Android Device တွေမှာ အသုံးပြုဖို့အတွက် ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ Top Paid 40 Android Apps & Themes Pack လေးတစ်ခုတွေ့လိုမျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီမှာတော့အလကား ယူပါ။ ပါဝင်တဲ့ Application တွေကိုတော့အောက်မှာ ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ။ ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေမသေခင် တွေ့တုန်း
လေး အမြန်ယူထားစေချင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Android 2.2 နှင့် အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ။
Air Call-Accept v1.3-AnDrOiD.rar
AppMonster Pro Backup Restore v3.0.1-AnDrOiD.rar
BigDX Clean Theme CM10 AOKP v1.8-ROOTED DEVICES ONLY-AnDrOiD.rar
Carbon for Twitter v1.2.4-AnDrOiD.rar
CM 10.1 AOKP THEME NEON COLORS v2.72-AnDrOiD.rar
ePSXe for Android v1.9.5-AnDrOiD.rar
F-Stop Media Gallery Pro v2.4.2-AnDrOiD.rar
File Expert Pro HD v2.0.0 bluid 210-AnDrOiD.rar
File Expert Pro v6.0.0 bluid 210-AnDrOiD.rar
GLASS APEX NOVA GO SMART THEME v6.5-AnDrOiD.rar
GMD Auto Hide Soft Keys PRO v1.0 ROOTED DEVICES ONLY-AnDrOiD.rar
GO Weather Forecast And Widgets Premium v4.11 build 70 UPDATE-AnDrOiD.rar
Hovering Controls v1.2.4-AnDrOiD.rar
HushSMS Full Version v1.9.2-AnDrOiD.rar
Jelly Bean Extreme CM10 AOKP v3.6-AnDrOiD.rar
Jotaplus (Text Editor) PRO v0.3.18-AnDrOiD.rar
Lets Create Pottery v1.50-AnDrOiD.rar
LPIN PLAYER PRO v1.0.11-AnDrOiD.rar
Lux Auto Brightness v1.58-AnDrOiD.rar
Nandroid Manager Pro v1.2.2-AnDrOiD.rar
Network Monitor Mini Pro v1.0.72-AnDrOiD.rar
Nova Launcher Prime v2.2 beta 1-AnDrOiD.rar
OsmAnd plus Maps and Navigation v1.5.1-AnDrOiD.rar
Polaris Office for Android Tablet v4.0.5005.15-AnDrOiD.rar
Poweramp Music Player FULL v2.0.9-build-528-ROOTED DEVICES ONLY-AnDrOiD.rar
PrinterShare Mobile Print Premium v8.3.6-AnDrOiD.rar
Pure Calendar widget (agenda) v3.2.0-AnDrOiD.rar
Pure Grid calendar widget v2.5.4-AnDrOiD.rar
Quad Drawer quick app drawer v1.0.1-AnDrOiD.rar
Rotation Lock Adaptive v1.93-AnDrOiD.rar
SkyORB v2.0.4-ROOTED DEVICES ONLY-AnDrOiD.rar
Smart IR Remote for Galaxy S4 v1.3.0-AnDrOiD.rar
Tersus (adw nova apex theme) v1.4.6-AnDrOiD.rar
tTorrent Pro - Torrent Client v1.2.0-AnDrOiD.rar
Tweetings for Twitter v3.5.0-AnDrOiD.rar
VIPER - Go Apex Nova theme v1.1.4-AnDrOiD.rar
Weather Station v2.4.1-AnDrOiD.rar
Yandex.Shell (Launcher andDialer) v2.26-AnDrOiD.rar
Huawei နဲ့ Sony ဖုန်းများရဲ့ Official Firmware ကို တစ်ချက်တည်းနဲ့ရှာဖွေ ဒေါင်းပေးမယ့် Official Firmware Searching Tool
MMUC က ကိုစိုင်းအာကာရဲ့ ဖန်တီးမှုလေးပါ.. Sony နဲ့ Huawei ဖုန်းတွေရဲ့ Firmware ကို အမျိုးအစားအလိုက် တစ်ချက်တည်းနဲ့ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်.. အသုံးပြုတဲ့ computer မှာတော့ Internet Connection ကောင်းကောင်းရှိနေဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Firmware တွေက File Size ကြီးမားလို့ပါပဲ..
ဒီပို့စ်နဲ့ MMUC က ကိုစိုင်းအာကာကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်...
မောင်ပေါက် < Knowledge Note>
Unlock Code တောင်းခဲ့ရင်
လိုင်းမကောင်းတဲ့ကြားက ဖုန်းလေးနဲ့ပဲ တင်လိုက်ပါတယ် (Computerမှာ Caution Mark ပေါ်နေလို့)
Memory Booster Full Version ပါ..အသစ်လေးပါနော်
သူက Task Killer ထဲ မှာ အကောင်ဆုံးလို့ခေါ်ရမလားပဲ UI လေးက 4.0.4 ပုံစံလေးနဲ့
ram ပြည့်လာပြီဆိုရင် သူဟာသူ kill လုပ်ပေးတယ်.. တော်တော်မိုက်တယ် ဒေါင်းးးလော့..
Min Gyi Taw
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက် မြန်မာစာအရေးရော ၊ အဖတ်ရောမှန်ကန်တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်အသစ်အနေနဲ့ Bagan Keyboard Pro v1.5 ထပ်မံထွက်ရှိလာပါပြီ။ တခြားစက်တွေကနေ ကိုယ့်ဖုန်းက Bagan Keyboard 1.နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ မြန်မာစာအမှန်ဖတ်ချင်ရင်တော့
တခြား keyboard သွင်းမထားဘဲ Bagan Keyboard Pro v1.5 for Android ကိုသွင်းထားမှသာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ features တွေလည်းတော်တော်စုံလင်လာပါတယ်။
Voice Input, Pop Up နှင့် Smiley Key တွေကိုလည်းထပ်မံထည့်သွင်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Bagan Keyboard Pro v1.5 for Android ကိုအောက်က link မှာရယူနိင်ပါတယ်။
Bagan Keyboard Pro v1.5 for Android အားရယူရန်
IDM နဲ့ ဒေါင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာနဲ့ IDM ကိုအပြည့်အစုံဖြုတ်နည်း
nyaminthar7: ဒေါင်းလွတ်ဆွဲရင်အပေါ်ကပုံအတိုင်းပေါ်ပေါ်လာလို့ပါ....Patch fileနဲ့လဲချိုးပီးပါပီ...
ပုံမှာကြည့်ရတဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ Download Link ရဲ့ Server ကြောင့်လို့ပဲထင်ပါတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် IDM ကိုဖြုတ်ပစ်ပြီး ပြန်တင်ရပါမယ်.. IDM ကိုဖြုတ်ရင် အပြီးအပြည့်အစုံဖြုတ်ဖို့လိုပါတယ်..
ကဲ IDM ကို ဖြုတ်နည်းအရင်ကြည့်ရအောင်..
1.ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်က Tray ထဲမှာ IDM icon ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး exit ကိုနှိပ်ပါ..
2.Ctrl+Alt+Delete (or) Taskbar ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Task Manager ကိုခေါ်ပါ.. အဲဒီထဲက IDMan.exe ကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပြီး End Process ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
3. Start>Control Panel > Add or Remove Program ကို အဆင့်ဆင့်သွားပြီး Internet Download Manager ကိုရွေးကာ Change/Remove ကိုရွေးပါ.. ထပ်ပေါ်တာတဲ့ဘောက်မှာ Complete Uninstall ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်ကာ အဆင့်အဆင့်ဖြုတ်လိုက်ပါ..
4. ပြီးရင် Browser တွေမှာ လိုက်ဖြုတ်ရပါအုံးမယ်.. Firefox သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်က Tools > Add-ons ကိုနှိပ်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ဘောက်မှာ Extensions ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး IDM CC ဆိုတာရဲ့ဘေးက Uninstall ကိုနှိပ်ပါ..
5. အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်က ဆော့ဝဲကို ဒေါင်းပြီး စက်မှာ Install လုပ်လိုက်ပါ..
6.ပြီးရင် အဲဒီကောင်ကို Run လိုက်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ဘောက်ထဲမှာ Internet Download Manager ကိုရွေးပြီး ဆော့ဝဲရဲ့ညာဘက်အောက်ထောင့်နားက Run Uninstaller ဆိုတဲ့ ငွေရောင် Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ကျန်တာတော့ မပြောတော့ဘူးဗျာ.. ပုံတွေကို ကြည့်ပြီးလုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ...
ကဲအခုဆိုရင်တော့ IDM ဟာ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ အမြစ်တောင်မကျန်တော့ပါဘူး.. ပြီးရင်တော့ CCleaner တို့လို ဆော့ဝဲနဲ့ စက်ကို သန့်ရှင်းရေးလေးဘာလေးလုပ်လိုက်.. ပြီးရင် Restart ချလိုက်.. ပြန်တက်လာတော့ IDM ကို ပြန်ပြီး Install လုပ်လိုက်.. ဒါဆိုရင်တော့ အပြည့်အ၀ အလုပ်လုပ်ပါပြီ.. မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဒါမှ အဆင်မပြေရင်တော့ ကိုယ်ဒေါင်းတဲ့ လင့်ရဲ့ Server ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
ကိုယ့်ဖုန်းကနေ အခြားဖုန်းရဲ့ Phone Call, Contact List, …တွေကို မိမိဖုန်းကနေကြည့်ကြမယ်
ကိုယ့်ဖုန်းထဲကနေ တစ်ခြားဖုန်းထဲက ph call, misss call, msg, contact list တွေကိုလှမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်
တစ်ခြား feature တွေကတော့ vibrate, silent, Flightmode, လုပ်လို့ရပါတယ် ပိုမိုက်တာက အဲ့ဖုန်းမှာ Internet ဖွင့်ထာုးရင် GPS location လှမ်းကြည့်လို့ရတဲ့အထိ မိုက်ပါတယ်ဒီ apk ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ် ဖုန်းနဲ့ သူ့ဖုန်း ၂ လုံးစလုံး မှာ ဒီ apk ကို install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ သူ့ဖုန်းထဲမှာ သူမသိအောင် ဒီ apk ကို install လုပ်ပါပြီးရင် run လိုက်ပီးတော့ password setting လုပ်ပါ (e.g password – 123456 )
ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ command ကို ရိုက်ပီးတော့ သူ့ဖုန်းကို sms ပို့လိုက်ပါ
ခဏနေရင် Automatic SMS ပြန်လာပါလိမ့်မယ်…..ဥပမာဗျာ……..သူ့ဖုန်းထဲ ၀င်လာတဲ့ missed calls တွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဖုန်းထဲကနေ ပီးတော့ 123456.getMissedCalls ဆိုပီးတော့
သူ့ဖုန်းထဲကို SMS ပို့လိုက်ပါ ခဏနေရင် sms ပြန်လာပါလိမ့်မယ်….အဲဒါက သူ့ဖုန်းထဲကို ၀င်ထားတဲ့
missed call ၅ ခု ပါ။ ဖုန်းနံပါတ်ပါ ပါတယ်နော်….application ရဲ့ command list ထဲမှာ Missed call ဆို ဘယ်လိုcommand, outgoing call ဆိုရင် ဘယ်လို command ရိုက်ဆိုပီး ရေးပေးထားပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါဦး………။
ဒါမှာ <<download >>လိုက်ပါ
စာရိုက်တော့မယ့်နေရာမှာ လက်မကလေးနဲ့ 3-စက္ကန့်လောက်ဖိထားလိုက် Select input method>>>> Frozin Keyboard ရွေးပေးလိုက်ပါ ။တစ်ချို့ကျတော့ ဖုန်းထဲမှာ ကီးဘုတ်ကလေးတော့ ရှိနေတယ် စာရိုက်တဲ့ အခါကျတော့ မရတော့ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီကီးဘုတ်ကလေးက အလုပ်မလုပ်လို့ပါ ဘာကြောင့်အလုပ်မလုပ်သလဲ ဆိုတော့ သူကိုခိုင်းမှလုပ်မှာပေါ့ မခိုင်းဘဲနဲ့တော့ သူကလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ အပေါ်မှာကြည့် စက်ထဲမှာရှိနေပြီးသားကီးဘုတ်ကလေးကို အလုပ်လုပ်ခိုင်းပြထားတယ်...
တစ်ချို့က ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Frozin Keyboard ကလေးထည့်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒီ software ကလေးက Phone Memory ထဲမှာဘဲ ထားတာအကောင်းဆုံးဘဲဗျ တကယ်လို့စက်က ဘက်ထရီဖြုတ်လိုက်တာတို့ Restart ချလိုက်တာတို့လုပ်လိုက်ရင် ပုံမှန် အလုပ်လုပ်နေအောင်ပေါ့ဗျာ အပြင်က SD Card ထဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ကလိုလေးပြန်လုပ်ပေးရမယ် ကီးဘုတ်ကလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါဗျ....
<<< ဒီမှာယူလိုက်ပါ >>>
facebook ပေါ်မှာ မိမိ နဲ့ 
ရဲ့ email လိပ်စာကို
တော့ ကျနော်လဲ အရင်တုန်းက တော်တော်လေး သိချင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက် သိချင်လို့လိုက်ရှာရင်း ဒီနည်းကို တွေခဲ့ပါတယ်။
လုပ်နည်းလေးကတော လွယ်ပါတယ်။ ဒီက နေသွားဒေါင်းလိုက်ပါ......။ပြီးရင်
Run လိုက်ပေါ့။ပြီးသွားရင်းတော့ facebook ကို sing in ၀င်လိုက်ပြီး
မိမိ link ကို copy ယူလိုက်ပါ.။
ခဏလောက်စောင့်လိုက်ပါ .။ Queue ဆိုတာကတော
အရေအတွက် နဲ့Search ကတော့ g mail .၊ Yahoo mail
သူငယ်ချင်းတို့ လဲ ပျော်ရွင် ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ.။
အောက်မှာ Video လေးကြည့်ကြည့်လိုက်နော်
သင် ဘယ် ၀က်ဆိုက်ကို ကြည့်နေနေ facebook chat ကို သုံးလို့ ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ browser extension or add-on တစ်ခုပါ။အဲဒီအတွက် သင့် facebook သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘဲ စကားပြောနိုင်မှာပါ။Chrome, Safari, Firefox, Opera, and Internet Explorer စတဲ့ browser တွေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။Tawea ကို သင့် browser မှာအင်စတောလုပ်ပြီးရင် ကွန်ပြူတာ screen ရဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာ ဘားတန်းလေးကိုတွေ့ မြင်နိုင်ပြီး အဲဒီကနေ Login လုပ်ပြီး Tawea ကို Permission ပေးပါ။
ပြီးရင်တော့ သင်ဘယ်ဝက်ဆိုက်ကိုကြည့်နေကြည့်နေ သင့် facebook သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချက်လို့ ရပါပြီ။
Smileys တွေသုံးလို့ ရသလို web ပေါ်ကပုံတွေကို chat box ပေါ်ကို drag and drop လုပ်ပြီးပို့ လို့ ရပါတယ်။နောက်ပြီး ပုံတွေကို facebook , twitter တို့ မှာ share အလွယ်တကူလုပ်လို့ ရပါတယ်။
APK ကို မြန်မာမှုပြုခြင်း အသေးစိတ်နှင့် Java ကို စတင် Install ပြုလုပ်ခြင်း
Posted by တော်ဝင်မင်းသားလေး | Labels: Android ဖုန်းဆော့ဝဲ, နည်းပညာ
Android Device မှာ Install ပြီး ဆော့ကစားကြတဲ့ ဂိမ်းလေးတွေ၊ Facebook, Twitter ကဲ့သို့သော Social
app လေးတွေ၊ စက်ကို အမှိုက်ရှင်းပေးတဲ့ app လေးတွေကို ကိုယ်တိုင် မြန်မာမှုပြုနိုင်စေဖို့ အသေးစိတ်
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တချို့တွေစမ်းသပ်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိနေကြသေးတာမို့
လို့ ဒီလို အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးလိုက်တာပါ။ အရင်ဦးဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ JDK (Java Development Kit) ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Java ကို Install လုပ်နည်း နဲ့ ထည့်သွင်းနည်း အသေးစိတ်ကို
"Java ကို Install စတင် ပြုလုပ်ခြင်း" အောက်မှာ ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကွန်ပျူတာမှာ Java
ထည့်သွင်းပြီးပြီ လို့ ယူဆလိုက်ပါတော့မယ်။ ဒေါင်းစရာ ဖိုင် နှစ်ဖိုင်ရှိပါတယ်။ မူရင်း Download Link ကတော့ >>> http://apkmultitool.com/?q=node/5 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Frame Work ဖိုင်ကို ဒေါင်းဖို့ ရှာမတွေ့ကြတဲ့အတွက် MediaFire မှာ တင်ထားပေးပါတယ်။
APK-Multi-Tool ကို Down ရန် >>> Download <<<
Framework ကို Down ရန် >>>Download <<<
ဒေါင်းလို့ ရရှိလာတဲ့ zip ဖိုင် နှစ်ဖိုင်ပေါ်ကို Right Click နှိပ်ကာ Extract Here ဖြင့် နှစ်ဖိုင်လုံးကို ခွဲလိုက်ပါ။
ခွဲပြီးသွားရင် framework-res_api16.apk ကို ကော်ပီကူးပြီး APK-Multi-Tool ဖိုဒါထဲကို ထည့်ပါ။
အဲ့ဒိ framework-res_api16.apk ဖိုင်ကို Rename ပြောင်းပါမယ်။ framework-res.apk လို့ပြောင်းလိုက်
ပါ။ ပြီးရင် other ဖိုဒါထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ခုပြောချင်တာက Rename ပြောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ဂရု
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Setup.bat ဖိုင်ကို Double Click နှိပ်ကာ Run ပေးပါ။ ပြီးသွားရင် Frame Work
ကို Install ဖို့အတွက် 2ကို ရိုက်ကာ Enter ခေါက်ပါ။
ပြီးရင် 1 ကို ထပ်ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
framework ကိုတွေ့ရှိပြီး Install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Press any key to continue ... ဆိုရင် ကီးဘုတ်မှ ကီး တစ်ခုခု နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် (ပိုရှင်းသွားအောင်) Setup.bat ကို ပိတ်ပြီး တစ်ခါ ပြန်ဖွင့်ပါ။3လို့ ရိုက်လိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်
ရင် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ဖိုဒါ အသစ်တွေကို တွေ့ရှိရမှာပါ။
လုပ်ငန်းစဉ် တော်တော် များများကို ပြီးမြောက်သွားပါပြီ။ မြန်မာမှုပြုဖို့ အတွက် စတင်ပါတော့မယ် ....။
place-apk-here-for-modding ဖိုဒါထဲကို ကိုယ် မြန်မာမှုပြုချင်တဲ့ apk ဖိုင်ကို ထည့်ပါ။ ကျွန်တော်က
တော့ နမူနာအနေနဲ့ Facebook.apk တစ်ခုကို ထည့်လိုက်ပါတယ်။
တစ်ခု သတိထားဖို့ ပြောချင်တာကတော့ ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ apk ဖိုင်ရဲ့ နာမည်ဟာ လုံးဝ Space မခြား
ရပါဘူး။ ဒါဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးရင်Script.bat ဖိုင်ကို Double Click နှိပ်ကာ Run လိုက်ပါ။ ကိုယ်
ထည့်လိုက်တဲ့ apk ဖိုင်ကို ရွေးချယ်ပေးဖို့ အတွက် 24 ကို ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
place-apk-here-for-modding ဖိုဒါထဲမှာ apk ဖိုင် များများထည့်ထားရင် များများပေါ်နေမှာပါ။ ကျွန်တော်
ကတော့ ခုနက ထည့်ထားလိုက်တဲ့အတိုင်း Facebook.apk ဆိုတာတစ်ခုတည်းရှိနေလို့ တစ်ခုတည်း ပေါ်
နေပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးကို ရွေးချယ်ဖို့ 1 ကိုရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
apk ကို Decompile ခွဲမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်9လို့ ရိုက်ပြီး Comment ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ခွဲနေပါ
လိမ့်မယ်။ ဖိုင်ရဲ့ ဆိုဒ် အကြီးအသေးကို မူတည်ပြီး ကြာချင်ကြာပါလိမ့်မယ်။
ခွဲပြီးသွားရင်တော့ Projects ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲမှာ ကိုယ်ခွဲထားတဲ့ Facebook.apk ဖိုဒါကြီး ရောက်ရှိလို့နေပါပြီ။
Script.bat ဖိုင်ကြီးကိုတော့ မပိတ်သေးဘဲ Minimize လုပ်ထားလိုက်ပါ။
မြန်မာ လို စာတွေ ထည့်နိုင်ဖို့ အတွက် အဲ့ဒိ Facebook.apk ဖိုဒါထဲကို ၀င်ပါ။ ပြီးရင် res ဖိုဒါထဲကို ၀င်ပါ။
အဲ့ထဲကမှ values ဖိုဒါထဲမှ strings ဆိုတဲ့ xml ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အောက်ပါပုံအတိုင်း </string> ဆိုတာလေးရဲ့ရှေ့က အင်္ဂလိပ်စာတွေကို သင့်တော်သလို မြန်မာ
အားလုံးပြောင်းပြီးရင်တော့ သိမ်းပါမယ်။ File ကို နှိပ်ပြီး Save as... ကို နှိပ်ပါ။
အဲ့နောက် အောက်ပါအတိုင်း Save as type မှာ All Files ကို ရွေးထားပါ။ Encoding မှာ UTF-8 ကို ရွေး
ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ Save ပေါ့...။
ဖိုင်က ရှိပြီး သားဖြစ်ပါတယ်... အစားထိုးမှာလား ??? ဆိုပြီးမေးလာရင် Yes ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Script.bat ဖိုင်ကို ပြန်သွားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ apk ဖိုင်က System apk မဟုတ်ရင် 12 ကို ရိုက်ပါ။ System apk
ဆိုရင်တော့ 11 ကိုရိုက်ပါ။ အခု Facebook.apk အတွက်ကတော့ System apk မဟုတ်လို့ 12 လို့ပဲ ရိုက်
လိုက်ပါ။ ပြီး ရင် Enter ခေါက်၊ ခဏစောင့် ! :D
1, 2, 3,4ရွေးစရာ မေးလာရင်2ကို ရွေးပေးပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် apk ကို Sign လုပ်ရန် အတွက် 13 လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
အားလုံးပြီး သွားပါပြီခင်ဗျာ ...... ။ ကိုယ် မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ apk လေး ကို တွေ့ချင်ရင်တော့ place-apk-here-for-modding ဖိုဒါထဲကို ပဲ ပြန်သွားလိုက်ပါ။ မူရင်း apk က Facebook.apk ဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာမှု
ပြုထားတဲ့ apk ကတော့ SignedFacebook.apk ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲ တခြား ဖိုင်တွေ ဖြစ်တဲ့ drawables ဖိုဒါတွေထဲကို လျှောက်ဝင်ကြည့်ပြီး ပုံ လေးတွေကိုလည်း
ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးတယ်ဗျာ.....။ တခြား apk ဖိုင် ( ဂိမ်းတွေ၊ စက်ရှင်းတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ) ကိုလည်း
Android APK တွေကို မြန်မာမှုပြုဖို့ အတွက် Java ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Java Programming ကို
လေ့လာကြဖို့ အတွက်လည်း အဓိကအနေနဲ့ လိုအပ်ပါတယ်။
Java ကို Install ပြုလုပ်ခြင်း မစတင်မှီ Java ကိုအရင်ဒေါင်းကြရအောင်။
အရင်ဦးဆုံး >>>ဒီလင့်ခ် <<< ကို သွားလိုက် ပါ ။
အောက်ပါပုံအတိုင်း အနီရောင်မြှားပြထားတဲ့ အကွက်မှာ License Agreement အတွက်
အမှတ်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ အစိမ်းရောင် အကွက်ထဲမှာ Java ဒေါင်းရန် အတွက် ကိုယ့်
ကွန်ပျူတာနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် Link ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။ ဥပမာ - ကိုယ့် ကွန်ပျူတာက 32 bit ဆိုရင်
Windows x86 ၊ 88.98 MB ဘေးက Link မှာ ဒေါင်းယူပြီး၊ 64 bit operating system ဆိုရင်တော့
Windows x64 ၊ 90.57 MB ဘေးက Link မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
Install လုပ်နည်းကိုတော့ အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူး၊ ဒေါင်းယူလို့ရရှိလာတဲ့ဖိုင်ကို Double Click နှိပ်
ပြီးတော့ Next များကို ဆက်နှိပ်သွားလိုက်ရင် Install လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားမှာပါ။ အဲ့ဒိနောက်မှာတော့
ကွန်ပျူတာက ကိုယ် Install လိုက်တဲ့ Java ကို သိမသိ စမ်းသပ်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Window key နဲ့
R Key ကို တွဲနှိပ်ပြီးတော့ Run box ကိုခေါ်ယူလိုက်ပါ၊ ပြီးရင် cmd လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
အဲ့ဒိနောက် Cmd ထဲမှာ Javac လို့်ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ Javac ဆိုတာကတော့ Java compile
ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
'javac' is not recognized as an internal or external command. လို့ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူ
တာက java ကို မသိသေးပါဘူး။ အဲ့ဒိအတွက် Path လမ်းကြောင်းပေးရပါမယ်။ My computer ရဲ့ C:\_
ထဲကို သွားပြီး Program Files ထဲက Java ဖိုဒါကို သွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် jdk ဖိုင် (အနောက်က ဗားရှင်း နံပါတ်တွေကတော့ ကွဲချင်ကွဲပါလိမ့်မယ်) ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
အပေါ်ဆုံးက bin ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို ထပ်ဝင်ပါ။
၀င်ပြီးသွားရင် အပေါ်ဆုံးက Application တစ်ခု (ဘယ်Application ကိုမဆိုရပါတယ်။ လွယ်သွားအောင်
လို့်ပါ) အပေါ် ကို ထောက်ပြီး Right Click နှိပ်ကာ Properties ကိုဝင်ပါ။
Location ဘေးမှာရှိတဲ့ Path လမ်းကြောင်း တစ်ခုလုံးကို Select မှတ်ပြီး ကော်ပီ ကူးပါ။
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Start button ကနေ Computer ကို Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကိုဝင်ပါ။
Advanced System Settings ကိုကလစ်လိုက်ပါက System Properties ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒိ ထဲက
Advanced Tab ကို သွားပါ။ အောက်နားက Environment Variables ကို ၀င်ပါ။
Environment Variables dialog box ကျလာရင်တော့ အပေါ်က New ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပါ။ ပြီးရင်
အပေါ်က Variable name မှာ Path လို့ရိုက်ထည့်ပြီး၊ အောက်က Variable value မှာတော့ ခုနက Select မှတ်ပြီး ကော်ပီကူးလာတဲ့ Java ရဲ့ Path လမ်းကြောင်းလေးကို Ctrl+V နဲ့ Paste ထည့်လိုက်ပါ။အားလုံး
ပြီးရင်တော့ Ok, Ok, ပေါ့ဗျာ....။
ဒါဆိုရင် Cmd ထဲကို ထပ်ဝင်ပြီး Java ကို သိမသိ စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။ Window key + R key နဲ့ Cmd ကို ဖွင့်ပါ။ Cmd ပွင့်ရင် အထက်တုန်းက စမ်းသပ်တဲ့ အတိုင်း Javac လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း Java ကို ကွန်ပျူတာက သိသွားပါပြီဗျာ....။
:o ... ဟူး ... ပီး တွား ပီ !!! :P
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...။
ဖတ်ရှုပေးတဲ့ အတွက် .... :D
နောက်ပိုင်းမှာ Java သင်ခန်းစာ တွေကို ဒီ ဘလော့မှာ တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်...။ ကျေးဇူး... ပါ... ။